November | 2011 | Aung Ko Htwe Personal Website | Page 2
jeon ji hyun twist fashion unbrella -red white c7 hand – A3shoe -yellow -B AB twist နည်းနည်းလှည့်ထားတယ်bဆွဲ
New movieီ67 and 8:30 hour and key and door တကယ်တော့ လှေကားမှာတံခါးမပါဘူး … အခက်အခဲ လျှို့ ဝှက်မှုလေး ထည့်ရေးလိုက်တာ … ၀တ္ထုလေးကြိုက်တယ်မို့လား… 8:30 ဆို သိပ်မသိကြတဲ့ကောင်လေးတွေလာဝိုက်ကြတယ် … အောင်သွယ်တော်2၊ သရေ ၊မင်း7၊ ဘယ် တော်တော်ကြိုးစားရတယ် ၊ 2007 second half
ပြည်ပမှာရှိသလို တကယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်း မှာလည် group ကိုယ်စားလှယ် လေးတစ်ယောက် ရှိသင့်တယ်ထင်တယ် ဥပမာ ။ ။ မယစ ထိခိုက်မျာလည်းစိုးရိမ်ရတယ် တချို့တွေကလည်ထင်တယ် ၊ ခရီးစဉ်ရန်ကုန် ၊ကြို ကြိုမေး ပြည်ပ မှာခင်တာရှိပြီး ၊ပြည် တွင်းမှာလည်းရှိသင့်တယ်ထင်တယ် ၊ နှစ်အပိုင်းအခြားနဲ့ပေါ့ ၊ နို့မို့ဆို တမျိုးကြီးပဲ ၊ ပြသနာရှိသလိုလိုဘာလိုလို ၊ တစ်ယောက်ကိုယ်စားလှယ်လေးရှိဘူးတယ် ဆိုတော့ ၊ တော်သေးတာပေါ့ ၊ ပြည်တွင်းgroup နဲ့လည်း မိတ်ဖက်ဖြစ်တာပေါ့ ၊
SEA Game U-23 ** MYANMAR Vs malaysha ပိုကြိုးစားဖို့လိုတယ် ကောင်တာတစ်ယောက်လိုတယ် ကွင်းလယ် က တိုက်စစ်၊ခံစစ် ကူပေးဖို့လိုတယ်
(50%)Chelsea Vs liverpool(40%) chelsea defense improve liverpool change ? 442 or 451 ? Nowrich Vs Arsenal arsenal improve needs to stable freekick ,corner two players ? vanperce good Man city Vs New castle man city needs to balance attack and … Continue reading →
SEA GAME 2011 U-23 * MYANMAR Vs Timol
friendly Germany Vs Horland germany needs defense horland attack super sub ? if injury vanperce /hanteler /and ? play-off Portugel Vs Bosnia needs to try some midfield needs to help cmf / amf
new album 67 is stronger then 56 စိတ်ဓာတ် ဟားဟား
Song Hye kyo giving photo /record i sent mail to .net gmail